Qarax Gaari Lagu Gubay Oo Gobalka Gedo Ka Dhacay. – Bogga Calamada.com
Qarax Gaari Lagu Gubay Oo Gobalka Gedo Ka Dhacay.
Wararka ka imaanaya gobalka Gedo waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi qarax culus lagula beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Saliibiyiinta Kenya ee duulaanka ku joogta deegaano ka tirsan gobalkaasi.
Qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxaa kolanyada Kenyaatiga ah ee lala beegsaday kusii jeedeen deegaanka Fafaxdhuun ee gobalkaasi.
Miinada ayaa haleeshay gaari Beebo ah oo qeyb ka ahaa gaadiidka ay wateen kolanyada Kenyaatiga ah ee qaraxa lala beegsaday,iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano iyo Tuulooyin u dhaw goobta qaraxa uu ka dhacay.
Gaariga Beebaha ah ee Miinada ay haleeshay ayaa gabi ahaan burburay waxaa sidoo kale qaraxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii Kenyaatiga ee lasocday gaariga ay miinada burburisay.
Qaraxan waxaa Mas’iiliyaddisa sheegtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxa uu qaraxan kusoo aadayaa xilli sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay qarax gaari Cabdi bile ah looga gubay dowlada Farmaajo uu ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho.